Aza manaiky ho resy. Mitaky fotoana ny zavatra lehibe. Mahareta. - Anony - Quote Pedia
Mety hiatrika toe-javatra samihafa ianao eo amin'ny fiainana rehefa mety te ho kivy ianao. Tsy tokony hanao toy izany mihitsy ny lehilahy matotra sy hendry! Tsarovy fa tsy misy fiovam-po ho amin'ny fahombiazana aorian'ny fanandramana voalohany.
Ireo olona manana fahombiazana rehetra izay hitanao manodidina anao anio dia tsy hafa afa-tsy ireo izay mbola tsy nanaiky ny tsy fahombiazana hatrany. Mety tsy nahomby aman-tapitrisany teo amin'ny fiainany izy ireo, saingy tsy nanaiky izy ireo na dia tao anatin'ny fotoana iray monja. Izy ireo foana no ireo izay niezaka foana hatrany.
Tsy fiainana afovoan'ny raozy ny fiainana, ary mety hahita fahasahiranana ianao amin'ity lalana ity, saingy mahomby kosa ireo izay manohy mandeha toy izany na dia teo aza ny sakana rehetra izay nandeha tamin'izany.
Ny fikirizana dia singa iray tena ilaina amin'ny famaritana raha mety hahavita ny fahombiazanao amin'ny fiainanao ianao na tsia. Mety hisy ny fotoana hahatsapanao ny hiala, fa ny fotoana maharesy anao dia manaiky ny tsy fahombiazanao ianao ary mandà tsy hitsangana intsony.
Raha manaiky ny faharesenao ianao dia milatsaka eo ny lalao avy eo. Raha tena te hahita fahombiazana ianao dia tokony hino ny tenanao ary hianatra ny mandà ny tsy ho kivy na dia resy imbetsaka aza ianao.
Tsarovy fa ny fahombiazana dia tsy tonga amin'ireo izay tsy nanary azy. Ireo izay kivy dia ireo izay tsy mitsahatra manome fialan-tsiny mandritra ny androm-piainany. Raha tena te-hiseho ho ohatra ho an'izao tontolo izao ianao dia mianara miasa, fa tsy hanaiky ny fahombiazanao.
Manam-paharetana ary omeo fotoana ny tenanao. Tsy mitranga tampoka ny zavatra mitranga. Tsy afaka mahita ny tenanao mijoro eo amin'ny tampon'ny fahombiazana ianao indray alina. Mila manome fotoana ampy ho an'ny tenanao ianao mba hanohizanao mandroso hatrany mandra-pahatonganao an'io fikaonan-doha io.
Mitovy amin'izay ihany, mitaky fotoana hiseho ny zava-mitranga. Matetika ny olona dia tsy mahomby satria tsy manam-paharetana. Raha tena te hahita fahombiazana ianao dia mila mahatakatra ny dikan'ny fanekena toe-javatra amin'ny fahatongavan'izy ireo ary mbola tazaho ho miraikitra amin'ny finoanao izany. Manantena, ary afaka hahatanteraka na inona na inona notadiavinao!
Teny momba ny fiainana lehibe
Aza manary toky ny antony manosika
Aza mitsahatra manindry teny
Mba mifalia. Tsy voatery ho tonga lafatra ny zava-drehetra. Saingy, satria misafidy ny hifantoka amin'ireo fotoana tonga lafatra ianao. - Anonyme
Ny tena mahasambatra dia safidy, ary sambatra na malahelo ny iray noho ny asany. Tsara ...
Indraindray Andriamanitra dia esorin'ny olona amin'ny fiainanao mba hiarovana anao. Aza manenjika azy. - Anonyme
Indraindray, ianao hihaona amin'ny olona tia anao eo afovoany. Tena ilaina ny mahatakatra fa Andriamanitra ...
Aza mandoro ny fotoana anananao fampiononana vetivety. - Anonyme
Amin'ny fiainana, tsy hahita ny fahombiazanao mora ianao! Mila miatrika fitsapana maro ianao miaraka amin'ny…
Alohan'ny hamoizanao azy, dia eritrereto ny antony nahatonga anao nihazona ela be. - Anonyme
Samy manana nofy sy filam-po avokoa isika rehetra. Isika rehetra dia te hahatratra tanjona voafetra amin'ny fiainana ary…
Ny fonao no toerana mahafinaritra indrindra eto ambonin'ny tany. Karakarao izy. - Anonyme
Tsy misy toerana azo antoka sy tsara noho ny fo marina. Tokony ho takatsika fa ny fihetseham-pon'olombelona…